NJEHIE NZUZO 0X80070643 NKỌWAPỤTA NCHỊKỌTA MAKA ONYE NCHEDO WINDOWS - WINDOWS - 2019
Otu n'ime njehie ndị na-eme ka onye ọrụ Windows 10 nwere ike izute bụ ozi "Ntọala Ntọala maka Windows Defender KB_NUMBER_ENALTY- error 0x80070643" na ebe melite. N'okwu a, dịka iwu, ihe ntinye Windows 10 na-arụ ọrụ (Dịba ama: ọ bụrụ na otu njehie ahụ na-eme n'oge mmelite ndị ọzọ, lee Windows 10 mmelite adịghị arụnyere).
Ntuziaka a ga-akọwa otu esi edozie nrụpụta Windows Defender update error 0x80070643 na wụnye mmelite dị mkpa na nkọwa nke antivirus wuru Windows 10.
Ịkwanye nkọwa nke ọhụrụ nke Windows Defender site n'aka Microsoft
Ụzọ mbụ na nke kachasị mfe, nke na - enyere aka na njehie 0x80070643 na nke a, bụ ibudata nkọwa Windows Defender site n'aka Microsoft ma wụnye ha na aka.
Nke a ga-achọ ihe ndị a dị mfe.
Gaa na http://www.microsoft.com/en-us/wdsi/definitions ma gaa na Aka na nbudata ma wụnye ngalaba nkọwa.
Na "Antivirus Windows Defender for Windows 10 na Windows 8.1", họrọ nbudata na obosara achọrọ.
Mgbe nbudata, na-agba faịlụ ahụ ebudatara, ma mgbe echichi zuru ezu (nke nwere ike iji "na nzuzo", na-enweghị ọdịdị nke windo arụnyere) gaa na Nchebe Windows Defender Security - Nchebe megide nje na egwu - Ndozi nchedo nchedo ma lee anya mbipụta egwu egwu.
N'ihi ya, a ga-arụnye ngwà ngwà kachasị ọhụrụ maka Windows Defender.
Ụzọ ndị ọzọ iji dozie njehie 0x80070643 na mmekọrita na imelite nkọwa nke Windows Defender
Na ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ nwere ike inyere aka ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ụdị njehie dị na ntọala melite.
Gbalịa ịme otu batrị dị ọcha nke Windows 10 ma chọpụta ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịwụnye nkwalite nsụgharị Windows Defender na nke a.
Ọ bụrụ na ịnwe antivirus nke atọ na mgbakwunye na Windows Defender, gbalịsie ike na nwa oge - nke a nwere ike ịrụ ọrụ.
Enwere m olileanya na otu n'ime ụzọ ndị a ga-aba uru maka gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, kọwaa ọnọdụ gị na ihe ndị a: ma eleghị anya enwere m ike inyere aka.